SATA MIFEHY NY MPANOHITRA : Hanao fakan-kevitra momba ny fanoherana eto Madagasikara ireo loholona anio
Araka ny tetiandro narafitra teo anivon’ny antenimieran-doholona dia anio no hanatanteraka ny fakan-kevitra hoentina hamolavolana ilay sata mifehy ny mpanohitra sy ny fanoherana eto Madagasikara ireo loholona. 21 août 2019
Handray anjara ao anatin’ izany ny avy amin’ny antoko mpanohitra sy ireo fiarahamonim-pirenena. Andrasana izay fanehoan-kevitra amin’izy ireo hoentina mandrafitra ilay tolo-dalàna ho an’ny satan’ny mpanohitra. Heverina fa hafana ny adihevitra mahakasika izany. Manana ny fomba fijeriny manokana ireo antoko mpanohitra izay hifantoka amin’ny tombontsoany. Tahaka izany ihany koa ireo fiarahamonim-pirenena izay efa nisy niady mafy ny hampiharana ilay lalàn’ny mpanohitra lany tamin’ny fitondrana tetezamita.
Takin’ireo efa mijoro ho antoko mpanohitra ny tsy hikitihana manontolo amin’ny ampahany an’io lalàna io. Ny fahefana mpanao lalàna ankehitriny anefa dia nanamafy fa tsy maintsy mandalo fandinihana lalina ny mahakasika io sata mifehy ny mpanohitra io mialoha ny hiadian-kevitra amin’ny fandaniana azy na tsia. Ankoatr’izay, samy nanome ny tolo-keviny harafitra ao anatin’ity lalàna ity ihany koa na ny teo anivon’ny governemanta, na ny teo anivon’ny fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana na ny vondrona parlemantera.
Miainga amin’ireo rehetra ireo ary mirafitra amin’ilay lalàna tsy nampiharina teo aloha ihany anefa no ahafahana manangana an’io lalàna mifehy ny mpanohitra sy ny fanoherana eto Madagasikara io. Ho an’ny eny amin’ny antenimieran-doholona dia amin’ny zoma izao no handalo eo anatrehan’ireo loholona ity lalàna mifehy ny mpanohitra ity raha toa ka efa nodinihina teny Tsimbazaza izany, ny talata lasa teo. Ny zoma io no hifarana ny fivoriana tsy ara-potoan’ireo parlemantera roa tonta izay nandinihana lahadinika miisa telo.